“Cadowga Saaxiib Ayaan Ka Dhigtaa” | Dhaymoole News
“Cadowga Saaxiib Ayaan Ka Dhigtaa”
February 26, 2018 - Written by wariye999
Madaxweyinhii hore ee Maraykanka Abrahm Lincoln oo ah ragga loogu jecel yahay Maraykanka wuxu talada dalkaasi qabtay 1861-1865. Waxa uu ahaa madaxweynihii 16aad , shaqadiisu waxay ahayd Qareen. Waxaana uu dalkaasi hogaaminayay markii uu ka socday dagaalkii sokeeye ee ugu weynaa dhiiga badana daadiyay.
Lincoln inkasta oo dhibaatadaasi jirtay haddana wuxu xoojiyay midnimada waxaana uu baabiiyay adoonsigii bulshada madow lagu hayay. Waxa uu awood u yeelay dawladda federaalka ah, dhaqaalaha dalkana wuu casriyey.
Abraham oo ah mid aad loo jeclaa oo furfuran ayaa la weydiidyay sababata waxaana uu ku jawaabay “ Kuwa cadowga ii ah waxaan ka dhigtaa saaxiib”. Sababaha guushiisana wuxu kaga jawaabay: “ Weligay qof wax la iiga sheegay uma rumaysan”, waana sababta guushayda. Maalinta aan guulaystaa waa maalinta aan saaxiib cusub helo.